ဒူဒူကြီး: Flow metering - pilot tube flow meter
pipe line အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့အခါ၊ full bore flow meters တွေကိုတတ်ဆင်ခြင်းမပြုပဲ၊ insertion flow meter လို့ခေါါတဲ့ pilot tube flow meters တွေကို၊ အသုံးပြုကာ flow rate ကိုတိုင်းတာကြ ပါတယ်။ pipe line အတွင်းကို၊ fluid စီးဝင်လာတဲ့အခါ၊ velocity ကြောင့် fluid flow ဟာ၊ tube အတွင်းကို၊ dynamic pressure နဲ့စီးဝင်လာပါတယ်။
Fig. pilot tube
tube အတွင်းမှာ မူလကတည်းက static pressure ဟာ၊ reference အနေနဲ့ရှိနေပြီး၊ dynamic pressure နဲ့ နှိုင်းယှဉ်တွက်ယူခြင်းဖြင့်၊ flow rate ကိုရရှိလာပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့၊ pipe line အတွင်း ကို၊ tube unit (၂) ခုထည့်သွင်းတိုင်းတာခြင်းမှာ၊ cumbersome ဆိုတဲ့၊ ထိန်းကြောင်းကိုင်တွယ်တဲ့အခါ ရှုပ်ထွေး ခက်ခဲမှုတွေဖြစ်ပေါါတတ်တဲ့ အတွက်၊ simple pilot tube ဆိုတဲ့ unit (၁) ခုတည်းကိုသာ၊ တတ်ဆင် ကြပါတယ်။ simple pilot tube unit မှာ hole တခုသာပါဝင်ပြီး၊ velocity pressure နဲ့ reference အနေနဲ့ ရှိနေတဲ့ static pressure ကို တိုင်းတာကြပါတယ်။
Fig. Simple pilot tube
u1 = The fluid velocity in the pipe, Δp = Dynamic pressure - Static pressure, ρ = Density
Fig. Pressure and velocity relationship
simple pilot tube မှာ၊ sample point တခုသာပါဝင်ပြီး၊ pipe မှာဖြစ်ပေါါတဲ့၊ fluid ရဲ့ velocity profile ပြောင်းလဲမှုမှတဆင့်၊ ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ pressure drop နဲ့ velocity တို့ရဲ့ square root relationship မှ flow rate ကိုတွက်ယူပါတယ်။ simple pilot tube တွေဟာ၊ accuracy အနေနဲ့ limit ရှိသလို၊ turn-down ration ပမာဏအနေနဲ့လည်း၊ သေးငယ်တဲ့အတွက်၊ averaging pilot tube တွေကိုပြောင်းလဲ တတ်ဆင် အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
Fig. Averaging pilot tube
averaging pilot tube ရဲ့ upstream side မှာ၊ sensing tubes တွေကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ pipe ရဲ့ velocity pressure တွေကို၊ sense လုပ်ပါတယ်။ tube assembly တခုလုံးမှ ရရှိလာတဲ့၊ pressure အားလုံး ကို၊ average ဆိုတဲ့ ပျဉ်းမျှတန်ဖိုးတခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ tube အတွင်းမှ static pressure နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဖို့ DP cell သို့ပေးပို့ပါတယ်။ DP cell မှ တဆင့် differential pressure ကို flow rate အဖြစ်ပြောင်းလဲ တွက်ယူပါတယ်။
pilot tube flow meter တွေဟာ၊ တည်ဆောက်ပုံရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး၊ ဈေးသက်သာပေမယ့်၊ pressure နဲ့ velocity relationship ကြောင့်၊ turn-down ration ဟာ (4:1) ခန့်သာရှိတာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။ vertically တတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်၊ fluid မသန့်ရှင်းတဲ့အခါ၊ sensing tube မှ bottom holes တွေပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့ အတွက်၊ horizontally အနေအထားမျိုးနဲ့ တတ်ဆင်လာကြပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 03:07